Ungayenza njani i-haircut cascade ekhaya? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayenza njani i-haircut cascade ekhaya?
I-haircut Cascade yinto engafaniyo yokubeka iinwele, kwaye yenziwa ngeenwele ezinde, kwaye zide, ngamanye amaxesha zimfutshane kakhulu. Ukuthetha ngokungqongqo, ukucheba kweCascade kujongeka kubhetele kwizinwele ezi-wavy ezibambe ivolumu kakuhle. Ungayisika ngokwakho. Iinwele zihlanganiswe ngaphambili, zidibaniswe kunye kwisithsaba nge-band elastic, umsila ubekwe kwinqanaba lweliso kwaye unqunywe. Emva koko iinwele ziyakrolwa, zibekwe kancinci Ukucheba iinwele kuthatha imizuzu emithathu kuphela.
Okwenziweyo kweenwele zokucoca iinwele; Yenziwa ngombandela wemizuzu kwaye ukuyenza ngokupheleleyo azikho izakhono ezifunekayo, ungayenza ngokwakho ekhaya, kuba oku ufuna isikere, isipili kunye nomnqweno ....
Ke kuqala simanzisa kancinci kwaye sidibanise iinwele ngononophelo ....
Ngaphambili, fumana ubude beenwele zakho ezimfutshane, uya kuba ngowona ubude bezinwele, unokwenza kancinci ...
Emva koko unokubetha iinwele zakho ukuze zingaphazamisi kwiibhendi enye okanye ezimbini, okanye ungangayihlabi ...
Qala ukucheba iinwele, hlamba iinwele zakho ngemigca ngokuhambelana nomgca wokukhula ...
Tsala le migca ngaphambili ngokuhambelana kumgangatho kwaye usike kwinqanaba elikhethiweyo ...
Kuyimfuneko ukusuka ngaphambili ukuya ngasemva kwentloko ...
Ungalibali ukuba yonke imitya engaphambi kokuba uchetywe iinwele kufuneka ihlulwe ngokuhambelana kumgangatho kwaye usike kwinqanaba elifanayo ...
Emva kweenwele, qiniseka ukuba uzikhuphele ngaphandle ...
Umfanekiso ubonakalisa inkcazo yokuqala yobude:
I-Haircut Cascade ngoku ihambelana kakhulu. Unokwenza njani i-cascade yeenwele ezibonakalayo kule vidiyo. Izinwele ziqala ngommandla wexeshana. Izinwele ziyasuswa kwiminwe. Ukucheba iinwele kwe-Cascade kusebenza ikakhulu kwizinwele ezinde.
Owu, izolo nje ndinemifanekiso enomdla.
Oku, kunjalo, ayiyiyo into efanekiyo, kodwa elula kwaye ilula ngakumbi. Izakhono ezizodwa azifuneki kwakhona)) Kum yayisisityhilelo. Kuba bekukho iimeko ebomini xa umlungisi weenwele engafikeleleki, kodwa sekunjalo kuya kufuneka uzichebe iinwele zakho -okokubeka ibhulukhwe yakho entlokweni yakho.
Ndivile ngeendlela ezahlukileyo zokwenza i-hairstyle; ndedwa ekhaya. Emva kokwenza umsila umva, sika ubude obufunayo. Yenza i-ponytail ngaphambili (ukudibanisa zonke iinwele ngaphambili) kwaye uyinqumle-ke ii-curls zangaphambili ziya kuba mfutshane kakhulu kunezo zangasemva. Kwaye ungathobisa intloko yakho ezantsi, ubuso buhambisane nomgangatho, ukudibanisa iinwele zakho phantsi, ngononophelo zincamathele zonke ngaxeshanye okanye ngamacandelo.
Ukwenza i-hacade yeenwele ekhaya.
Ukucheba kwe-Cascade kungenziwa ngeendlela ezi-2:
ukudibanisa umsila ngasemva kunye nokusika ukuya kubude obufunekayo
ukudibanisa umsila phambili kunye nokusika kubude obufunekayo (umahluko onokubakho ngaphambili uye ekhohlo uye ekunene)
Yahlula iinwele ezihlanjelweyo nezomisiweyo zibe yinxalenye ethe tye kwaye uzithambise kancinci. Emva koko tsala imitya emincinci kumacala omabini, uwabeke ngokufanayo kumgangatho. Lungisa ezinye iinwele ngasemva kwentloko.
Emva kokuba imitya yokuqala isikiwe, ungazahlula le micimbi ilandelayo kwiinwele eziqokelelwe ngasemva kwentloko. Ezi yokugqibela ziya kuncitshiswa kwinqanaba langaphambili. Sika lonke ivolu yeenwele kwinqanaba elifanayo.
Yenza i-cascade yeenwele ekhaya unako ngokulula.
Kule nto, namhlanje mininzi imithombo yolwazi-le yi-Intanethi (ividiyo kunye neefoto), kunye neemagazini malunga nobuhle nefashoni, njalo njalo.
Ukuchetywa kweenwele ezingenahluli yenye yeendlela zeenwele ezifashisayo.
Kumfanekiso, ungabona ukulandelelana kwemisebenzi yokusika ikhasino.
Oku kweenwele kwenziwa ngeendlela zokususa umnwe. Ungakhangela iividiyo kwinethiwekhi
I-Haircut yeCascade ayilahli ukuhambelana kumashumi eminyaka. Kusenokwenzeka ukuba akukho mfazi ungatshatanga obekhe wazama ukufumana imbonakalo yeCascade.
Imfihlo yonke yale nto, enyanisweni, ukucheba iinwele ngokuthe ngqo kukuba kumantla ophakathi omtya, sidibanisa imitya elandelayo ukusuka kumacala onke, siyitsale, siyinqumle ngeminwe kwinqanaba lobude bayo. Kwaye njalo phezu kwentloko. Ingxaki inokuthi ivele kwisikali esihle sobuchule kunye nesikere esincinanana, ngenxa yokuba emva koko kuncipha ngaphezulu kwenani lonke leenwele kunqweneleka kakhulu. Ngaphandle kokugaya, isiphumo asifani.
Ndisika intombi yam. Ukucheba iinwele kwathatha imizuzu engama-30. Kwavela ukuba kuhle. Ukungabikho kwesikere sokucamba, ukucheba kwakufuneka kwenziwe ngesikere esiqhelekileyo kuphela ecaleni komphetho weenwele. Kodwa bendisele ndinamava okusika uKare, iOlympia, kunye neempahla zamadoda.
Ukuchetywa kweenwele ezingenahlafunwayo-oku kuyinyani yeenwele, xa iinwele eziphezulu nasephezulu zentloko zincinci okanye zimfutshane kakhulu kunwele ezisezantsi.
Ukwenza iinwele ezinjalo, akuyimfuneko ukuya kumgcini weenwele kwaye unokusika iinwele zakho ngale ndlela ngokwakho.
Ukongeza kwendlela esele icetyisiwe, ngoncedo lwebhendi ye-elastic kunye nomsila kwisithsaba, xa umahluko kubude beenwele awukho mkhulu kakhulu, unokuzimela ngokuzimeleyo kwinqanaba le-Cascade.
Uya kudinga isikhafu esihle (kubhetele ukuthenga ezobuchwephesha eziya kukucheba iinwele zakho, zingakrazuli okanye zikhuphe), i-hairpin kunye ne-band elastic. Nayi ividiyo eza kukufundisa oku kweenwele ekhaya (nangona ividiyo ibhalwe ngesiNgesi, iyaqondakala ngokupheleleyo).
Ukwenza i-hairstyle ye-cascade ekhaya isisiqingatha samandla. Ukwenza oku, uyakufuna izixhobo kunye nezixhobo:
Hlanganisa zonke iinwele kwisithsaba kwaye uthathe kumsila oqinileyo. Emva koku, iziphelo zomsila kufuneka zidityaniswe ebusweni kwaye zilolwe ngokulinganayo ngesikere. Ngenxa yoko, ufumana isiphumo sokubhabha okufutshane kwesitepsi, esihamba malunga ne-chin. Emva koko kuya kufuneka uyilayishe i-hairstyle yakho, njengekhasethi eqhelekileyo.
Ndicebisa ukubona ividiyo yendlela yokwenza i-hairstyle quot; I-Cascadequot;yenziwe kwiimeko zekhabin.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,333.